Raha ny fitantarany dia notsindronin’ilay vadiny antsy tsy nananana antra ny reniny ary nesoriny sy notetitetehiny ny lelany ka maty tsy tra-drano. 32 taona ilay ramatoa ary mitondra vohoka 3 volana. Nambarany fa mandatsa sy manao teny mahery aminy matetika ka tsy zakany. Niakatra nankao amin’ny tompon-trano izy avy eo ka novonoiny koa ireo. Nandray ny andraikiny avy hatrany ny mpitandro ny filaminana fa efa nanomboka ny fitsaram-bahoaka. Efa nalefa eny Tsiafahy ilay vady nahavanon-doza. Marihina fa mbola misy tsaboina eny amin’ny hopitaly ireo olona novonoiny.